Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Tsy maintsy atao any Italia izao ny fizaham-pahasalamana COVID-19
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Zon'olombelona • Vaovao farany Italia • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Heverina ho fitaovana handraketana ny satan'ny COVID-19 an'ny olona iray sy ny fanaovana vaksiny hanamorana ny fivezivezena, ny mari-pahaizana momba ny fahasalamana coronavirus dia efa natomboka tany amin'ny firenena eropeana maro.
Italiana izao dia mila taratasy fanamarinana vaksinin'ny COVID-19 "Green Pass" ho an'ny mpiasa nasionaly rehetra.
Ny mpiasa Italiana tsy manana taratasy fanamarinana ara-pahasalamana dia haato amin'ny asany tsy misy karama.
Ireo mpiasa miseho hiasa nefa tsy misy taratasy fanamarinana dia iharan'ny sazy lehibe manomboka amin'ny 600 ka hatramin'ny 1,500 Euros.
Ny taratasy fanamarinana 'Green Pass' an'ny COVID dia tsy maintsy atao ho an'ny mpiasa Italiana rehetra, araka ny drafitra vaovao, nankatoavin'ny governemanta Italia androany.
Ny drafitra, nankatoavin'ny governemanta Italiana androany, ary notohanan'ny Antenimieran-doholona Italiana (tamin'ny 189 nifidy azy io, 32 ihany no manohitra sy roa tsy mifidy) dia hapetraka amin'ny 15 Oktobra.
Drafitra vaovao, izay hahitana ireo tsy manana pas dia apetraka am-pialan-tsasatra tsy misy karama, dia hijanona hatramin'ny faran'ny faran'ity taona ity farafaharatsiny.
Manomboka amin'ny 15 Oktobra, ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina rehetra any Italia dia mila mahazo a COVID-19 'Green Pass' fanamarinana.
Ireo izay tsy mahavita ny taratasy fanamarinana rehefa angatahina dia azo ajanona amin'ny asany aorian'ny fotoam-pahasoavana mandritra ny dimy andro, na dia tsy azo roahina aza.
"Manitatra ny adidin'ny green pass isika eo amin'ny tontolon'ny asa, ho an'ny daholobe sy ny tsy miankina, ary antony roa lehibe no anaovanay izany: ny hahatonga ireo toerana ireo ho azo antoka kokoa ary hahatonga ny fampielezana vaksininay ho matanjaka kokoa," hoy ny minisitry ny fahasalamana Roberto Speranza hoy izy.
Ny mpiasa tsy manana taratasy fanamarinana COVID-19 manan-kery izay mbola sahy miseho asa dia iharan'ny sazy lehibe, manomboka amin'ny € 600 ka hatramin'ny 1,500 (705 $ ka hatramin'ny $ 1,175). Ny antsipiriany misimisy momba ny drafitra dia antenaina haseho tsy ho ela amin'ny fomba ofisialy.
Tamin'ny volana Aogositra, Italia nanao ny pasany ho takiana amin'ny fitsidihana ireo toerana ampahibemaso, toy ny trano fisakafoanana sy fisotroana, avy eo dia tsy maintsy ataon'ny mpampianatra sy ny mpiasan'ny daholobe hafa ny fiandohan'ity volana ity. Ankehitriny, izy no lasa firenena eropeana voalohany nanao ny taratasy fanamarinana ho adidy ho an'ny mpiasa rehetra ao aminy.